Ifomwork, Banikwe i-ACP kunye noMvelisi wamazwe angaphandle e-China ngaphezulu kweminyaka engama-20
Ifom yomthi weplanga
H Isakhelo senkunkuma
U intloko kunye nesiseko seJack
Ipropathi yentsimbi eguqukayo
IPlank (Catwalk) kunye neZinyuko
Ifomathi yeAluminiyam kunye nefomathi yemveli yemveli Ukuthelekiswa kwezibonelelo zoqoqosho
Ifomathi yeAluminiyam kunye nefomathi yemveli yemveli Ukuthelekiswa kwezibonelelo zoqoqosho Iprojekthi yeAluminium formwork Umthi wokhuni formwork Uqoqosho kunye nolwakhiwo olusebenzayo Ulwakhiwo olukhethekileyo, ukhuseleko, ukufakelwa ngokulula kunye nokudilizwa. Iingozi zarhoqo zokhuseleko, ...
Kutheni le nto ixabiso lesinyithi linyuke kakhulu emva ko-Meyi 1, 2021?
Esona sizathu siphambili: 1. "Ukunyuka kweCarbon kunye nokungathathi cala kwekhabhoni" kukuzinikela okwenziwe yiChina kwihlabathi, kwaye iiprojekthi ezingazifezekisi iimfuno zokusetyenziswa kwamandla aphezulu kunye nokukhutshwa okuphezulu kufuneka zilahlwe ngokuqinileyo. Olu luluhlu olubanzi nolunzulu lohlaziyo lwezoqoqosho nezentlalo ....
Uyakha njani i-ringlock scaffolding? Imveliso ethandwayo e-Indonesia, Philippines, Thailand, Vietnam, Cambodia, Egypt, Saudia arabia
I-ringlock scaffolding luhlobo olutsha lwenkqubo yokugaya. I-ringlock scaffolding ikwabizwa ngokuba yi-disc lock scaffolding, i-rosette ringlock scaffolding kunye ne-layher scaffolding, njl njl. Isetyenziswe ngokubanzi kwiiprojekthi zolwakhiwo ezinje nge-viaducts, iitonela, iifektri, njl., ...
Umhlaba wesicelo se-ringlock scaffolding kuMazantsi mpuma e-Asiya
Intsimi yesicelo se-ringlock scaffolding e-South East Asia Eyona nto iphambili ye-ringlock scaffolding ibhalwe kwi "ringlock ring plate", ipali yokugaya ifakwe ngeplate, i-horizontal ifakwe ngokudibeneyo, kwaye i-bolt isetyenziswa njengesinxibelelanisi ukwenza i-ri ...
Amaxabiso entsimbi yasekhaya ayaqhubeka enyuka
ngomphathi ku 21-04-13
Umbono ongundoqo: Ukusuka kwicala lonikezelo, iimveliso zentsimbi yasekhaya ziyachaphazeleka kulungelelwaniso lomgaqo-nkqubo weqhinga "lokungathathi cala kwekhabhoni", oya kuthi uthintele imveliso yentsimbi yasekhaya kwixesha eliphakathi nelide. Kwixesha elifutshane, Tangshan kunye Shandong ukhuselo lokusingqongileyo uya kuphumla ...
Ulwakhiwo formwork-6 iimpawu zokwakha ngamaplanga formwork
Ulwakhiwo lwefomwork-6 yeempawu zokwakha iiplanga zokwakha ngamaplanga formwork Izikwere zomthi kunye neefomwork bezisoloko zibubutyebi bobabini bokwakha. Kwiminyaka yakutshanje, i-plywood formwork formwork iye yaphuhliswa ngokukhawuleza, kwaye ezona ntlobo zemithi ziqhubekileyo yi-eucalyptus kunye nepoplar. Iap ...
Ukuthelekiswa kwamaxabiso angaboniyo ayisiyiyo inketho, kwaye kuya kufuneka uthathele ingqalelo kula manqaku xa uthenga i-ringlock scaffolding!
Kwimpelaveki ephelileyo, ividiyo ye-rosette ye-ringlock engaphantsi yahlulwa. Kwividiyo, uyabona ukuba umsebenzi wayebetha idiski ngombhobho wentsimbi. Emva kokubetha kabini kuphela, icwecwe ngokucacileyo lalaphukile. Njengecandelo eliphambili lefreyimu yohlobo lwe-ringlock, i-disc ye-ringlock yinxalenye ebalulekileyo ethi ...
Xa ukuseta i-scaffold kumiselwe, ungadibanisa njani imibhobho kunye nokudibanisa?
Xa ukuseta i-scaffold kumiselwe, ungadibanisa njani imibhobho kunye nokudibanisa? Nangona unokukhetha i-cuplock, i-ringlock, i-lock-lock, njl njl., Ukuxhamla, iindleko, ukusebenziseka, kunye nokuqwalaselwa okufanelekileyo, i-coupler-type steel pipe scaffolding iseninzi kwimarike. Ingasetyenziselwa hayi kuphela ...
I-ringlock Scaffolding ilunge ngakumbi kunenkqutyana ye-cuplock?
I-ringlock Scaffolding ilunge ngakumbi kunenkqutyana ye-cuplock? I-Ringlock scaffolding kunye ne-cuplock scaffolding ziindidi ezintsha zokunkcenkceshela, kwaye zombini zinokusetyenziswa njengefomwork yenkxaso, ke ngoku ziphi ezi zinto zimbini zihlala zithelekiswa, kodwa uninzi lwabantu lucinga ukuba i-ringlock scaffolding ibhetele kune-cuplock sca ...
Njani malunga banikwe kwalenza? Ngaba kulungile ukusebenzisa?
Banikwe kwalenza ngokubanzi kubhekiswa ringlock itheko ethandwayo. Umphezulu itheko ringlock iphathwa yi inkqubo eshushu-nkxu galvanizing, kwaye ubomi inkonzo ifikelela kwiminyaka eli-15. I-ringlock scaffolding inexabiso eliphantsi kunye nokusebenza kakuhle. Kulula ukuqaqa kunye s ...
I-aluminium formwork kunye nemithi yesiNtu ...
Kutheni iipaneli zealuminium ezidityanisiweyo ...
Kutheni le nto ixabiso lesinyithi linyuke kakhulu ...
Uyakha njani i-ringlock scaffolding? Ipopu ...
Intsimi yesicelo ringlock banikwe ...
Izixhobo zeKwikstage Scaffolding, IiPropati zoKwakha zoLwakhiwo eziQinisekayo, Banikwe Screw Adjustable Screw, Heavy Duty Ringlock banikwe, Ringlock banikwe Izahlulo, Isibiyeli seBhendi yesandi,